Home Wararka Ictizaam oo Shir Degdeg ah Qabaneysa oo Farmajo lagu Taageerayo Intuusan...
Ictizaam oo Shir Degdeg ah Qabaneysa oo Farmajo lagu Taageerayo Intuusan Waqtiga ka Dhamaaan
Sheekh Bashiir Axmed Salad oo ah shkhsi ka tanaaday dowladda Farmajo, lana kowsaday maalintii doorashada oo uu xildhibaanada ku siray Codkiinna ku cibaadeysta ayaa waxaa uu wadaa abaabul weyn oo uu rabo inuu dadka Somaliyeed ku khiyaano fekerka Wahaabiga ah ee ah in Xukuumadaha lala shaqeysto. Wahaabiyadau waxay aaminsan yihiin inaan xukaamta ama madaxda laga hor iman waana waxa hadda ka jira dalalka Carabta.
Somaliya waxay la daalaa dhaceysaa dhaxalkii iyo ilmihii u dhalay ururkii Itixaad Al Islaami ee dhalay labada urur ee khaterta ku haya Somaliya ee Alshabaab iyo Ictizaam. Ururkan Iztizaam oo ah madaxdyaweyntii Atixaad Al islaami, kuwaas oo badashay magacii ay Gedo, Saliid, Bacaadweyn, Bosaaso dadka Muslimiinta kula laayeen ee Altixaad lana baxay magac ah Ictizaam ayaa markale raba inay weji cusub yeeshaan oo si qarsoodi ah oo Shabaab ula galeenBayco qarsoon ayaa raba inay Xamar Shir deg dge ah ku qabtaan.
Ictizaam waxay hadda ka wadda k/Somaliya inay Xamar ku qabato shirkaas oo ay iskugu keeneyso madaxdweynta uruka sida Sheekh Bashiir iyo Cali Wajiis oo Xamar Jooga oo wada abaabulkaas si loogu taageero MW hadda ee muddo xileedkiisii dhamaadka yahay balsa diidan inuu doorasho qabto. Umal iyo Shible oo Nayroobi jooga iyo Sh Mustafa Xaji Ismaciil Haaruun oo Garoowe ku sugan oo isagu ah shakhsi aan is caddeyn inuu ururka ka tirsan yahay balsa ka mid ah ragga ugu awoodda badan ee qarsoon ayaa a filayaa inay ka soo muuqdaan.
Manhajkii iyo Kurubkii shabaabka lagu dhisay weli waa la akhriyaa, culimadii hawshaas wadday ayaa dalka weli culimo ah, qofkasta oo dhibka hadlaana xukunkiisu waa dil sida Cabdiladif Muse Nuur (Sanyare) oo ah guddoomiyaha Gobolka Mudug oo Ictizaam ku eedeyey inay dabka inta shidaan ka dhuntaan, kadibna dil lagu xukumay.
Sheekh Maxamed Idiris oo aan isaga la gabban naceybka uu u qabo dadka Banadir iyo Madaxdii hore diinna aan shaqo ku lahayn, ayaa la filayaa inuu Turkiga ka yimaado, sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu ka soo qeybgalo Dr. Cali Maxamed Saalax, lama hubo inuu iman doono Sheekh Cabdirashiid Sh Cali Suufi.
Waayo ururkanIctizaam oo berayahan jab kala kulantay bushada dhexdeeda waxay wadeen dib isu abaabul magac dhis ah oo waxay keenayeen culima aan Xarakooyinka lagu aqoon sida Sh Cabdirashiid Sh Cali Suufi iyo Sheekh Mustafa intkastoo Sh Mustafa weligiiba ahaa xubin muhiim ah oo ka tirsan Itixaad Al islaami.
Shirkan degdegga ah ayaa waxaa qaban qabadiisa xoog looga dareemayaa magaalada Muqdisho, waxaana ammaankooda ballan qaaday inay iska kaashanayaan sugidiisa Dowladda Farmajo iyo Alshabaab. Waxaasa la yaab leh haddii ay labadaas ilaalinayaan cidda kale ee laga ilaalinayo?
Sheekh Bashiir iyo Sh Cali Wajiis waxay si xarrago leh ugu nool yihiin hoteelada Muqdisho iyagoo lagu wado gawaarida aan Xabadda Karin, kuna qaata mushaarooyin sare oo dhowr kun oo dollar Bishii. Laakiin waxaa hadda u muuqata inay waxaas soo dhamaanayaan haddii Fahad iyo Farmajo Xamar laga eryo maalmaha soo socda, waana sababta keentay shirkan taageerada ah oo ay wax badan ku hoos qarsan yihiin.
Shirka dhaqaalihiisa waxaa bixinaya Gudoomiyaha Gobolka Banadir Cumar Finish oo ku shubi doona wadaadada lacagtii xooga looga guray dadka Muqdisho ee aan mayada aqoon oo iska irmaan.
Shirkaan waxaa loogu talagalay in hadda lagu taageero Farmajo inta aysan maalmaha ka dhamaan, waxaana soo qaban qaabaiyey oo ay talada ka soo fushay Fahad Yasiin, waxaana horboodaya oo xoog arrinka u wada Sheekh Bashiir Axmed Salad oo ka leh dano kala duwan:
In Ictizaam ay noqoto cidda go’aamineysa dowladdaan inay sii joogto.
In Ictizaam iyo Shabaab ay isla shaqeystaan oo dadka si caqli ah lagu ogoleysiiyo, waayo waxa yaab leh in shabaab ay dadka colaad u qabaan iyodoo culimadii shabaab dhasahy, korisay oo si dedban u difaaceysa in ay weli culima noo yihiin waa nasiibdarada na haysataa. Dilka Shabaab waa Fikirka culimada Ictizaam oo isku isir waana fekerka Wahaabiga ah.
In Suufiyada Weerrarro lagu qaado iyadoo la adeegsanayo wadiiqa walba oo suuragal maadaama ay Bulshada beryahan ku xerantay Suufiyada oo ay arkeen inay yihiin ciddii laga abaal ka dhacay, bulashadana ay dareentay inay yihiin culimadii ka msauulka ahayd inuu dalkaan boqolkiiba boqol muslim yahay.
Shirkaan Ictizaam waxaa uu dalka sii gelinayaa caqabad hor leh oo Ictizaam haddii ay gacanta wax waliba u galaan waxay si toos ula hawlgali doonaan shabaab waxaana laga yaabaa inay magaalada Muqdisho la wareegaan taas oo keeni donta in dalka markale uu waddo cusub oo cabsi leh uu qabsado.
Halkaan ka dhageyso fekerka na dilaya ee Ictizaam iyo ilamahooda shabaab ay wadaan.